Waan aaminsanahay isaga – Gareth Southgate oo Qalbiga u Qaboojiyay Jadon Sancho oo xaalka ku xunyahay | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Waan aaminsanahay isaga – Gareth Southgate oo Qalbiga u Qaboojiyay Jadon Sancho...
Waan aaminsanahay isaga – Gareth Southgate oo Qalbiga u Qaboojiyay Jadon Sancho oo xaalka ku xunyahay
Gareth Southgate ayaa qirtay in qaab ciyaareedka Jadon Sancho ee Manchester United uusan ku filneyn inuu u qalmo wicitaan England laakiin wuxuu ku daray kooxdiisii ​​ugu dambeysay si uu u muujiyo inuu sii heysto weeraryahankan.
Sancho ayaa Man United kaga soo biiray Borussia Dortmund laakiin ilaa haatan kuma guulaysan in uu qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa u soo bandhigo Premier League.
21 jirkaan ayaa dhaliyay 49 gool waxaana uu caawiyay 60 gool seddexdii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay Germany ka hor inta uusan ku laaban England si uu ugu saxiixo kooxda Ole Gunnar Solskjaer.
Jadon Sancho ayaa si tartiib tartiib ah ugu bilaawday nolosha Manchester United Tan iyo markaas wuu dhibtooday oo weli ma uusan diiwaangelinin darbo bartilmaameed ah shantiisii ​​kulan ee ugu horreysay Premier League.
Si kastaba ha ahaatee, Sancho-oo la kulmay cunsurinimo online ah kadib markii uu kursiga keydka ka soo kacay si uu rigoore uga qasaariyo England Final-kii Euro 2020 ee guuldarro ka soo gaartay Italy-wuxuu sii haystay kalsoonida tababaraha Three Lions Southgate ee kulamada isreeb-reebka Koobka Adduunka ee soo socda ee Andorra iyo Hungary.
“Miyuu u qalmaa inuu ka mid noqdo bandhigyadan dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay? Malaha Maya,” ayuu Southgate ka yiri da’yarkii hore ee Manchester City.
“Laakiin waxaan u maleynayaa inaan dareemeyno inaan caawino Jadon in muddo ah, waxaan aaminsanahay inuu gaari karo heer sare.
“Waxaan jeclaan lahaa in aan waqti la qaato si aan ula sheekeysto oo aan u caawiyo geedi socodka ka socda Manchester United sidoo kale waxaan u maleynayaa in uu dareemo in aan aaminsanahay isaga waqtigan waa farriin wanaagsan.
Previous articleMason Mount, iyo Reece James oo la sheegay Kulanka ay ku soo laabanayaan Chelsea
Next articleSomaliland oo u hanjabtay ergadii afka duubatay ee doorashadii Aqalka Sare
Argentina ayaa diiday dalabka Tottenham Hotspur ee ah inay fasaxdo Cristian Romero iyo Giovani Lo Celso horaanta fasaxa caalamiga ah ee soo socda. ...
Rooble oo war cusub kasoo saaray kiiska Ikraan Tahliil
Wararka Suuqa Maanta: Man United oo heshay Badalka Paul Pogba, Xaalada...